Umbono weTrondheim Fjord - I-Airbnb
Umbono weTrondheim Fjord
Indlu yonke sinombuki zindwendwe onguInger O.
UInger O. yi-Superhost
Ungarhoxa simahla ngaphambi kwe-23 Sep.
Ikhabhinethi yagqitywa ngo-2017, kwaye intle kwaye isemaphandleni inombono omhle weTrondheimsfjord. I-Grønningen yiyure enye kunye nemizuzu eyi-10 ukusuka eTrondheim. I-cottage inamagumbi okulala amane aneebhedi ezilithoba zizonke, kwaye kukho neloft ebanzi enendawo yokuhlala, ibhedi eyongezelelweyo kunye nebhedi.
Indawo entle yokukhwela intaba inokufunyanwa kwangoko kwi-cottage, kwaye kukho amachibi okuloba akufutshane.
I-cottage ifanelekile kwiintsapho ezimbini.
Ukufikelela ngokulula, kunye neyokupaka ngokukhawuleza kwi-cottage.
Kukho umbono omkhulu wefjord, ngeefestile ezinkulu kwigumbi lokuhlala eliphambili. Zininzi iihambo ezintle zokuya kwindawo ekufutshane, zilungele abancinci nabadala. Unako, umzekelo, ukufikelela kwelinye lamachibi amaninzi akufutshane kunye neentlanzi, okanye ukuloba iintlanzi elwandle ukuba ufuna iintlanzi ezinkulu.
Kwabaqalayo, kukwakho neendawo ezininzi ezintle zokunyuka, zombini iindlela eziboshiweyo nezingabotshwanga.
Ekubeni isemaphandleni, kuyamangalisa ukuhlala phandle ngorhatya ujikeleze umlilo, yaye ukuba akunamafu, isibhakabhaka esineenkwenkwezi sisoyikeka. Ebusika, akuqhelekanga ukubona izibane zangasentla.
40" HDTV ene-I-Netflix, I-Apple TV, I-Amazon Prime Video, I-Disney+, I-HBO Max
Iintsuku eziyi-7 e Lensvik
E-Agdenes kukho amathuba amahle okunyuka intaba. Kukho amathuba okuqesha amaphenyane kunye nezikhephe kule ndawo. Kukho iindawo ezininzi zokukhwela ngaphandle kwabo banomdla. Ngaselwandle kukho iindawo ezininzi ezintle zokuqubha kunye neendawo zokuloba. Incwadana eneziphakamiso zokutyelela kunye neendlela zokunyuka ziyafumaneka kwi-cottage. Ivenkile yimizuzu emi-5 xa uqhuba.
Umbuki zindwendwe ngu- Inger O.
Njengomthetho jikelele, nina njengeendwendwe niya kushiywa ngoxolo. Sifumaneka ngefowuni, i-imeyile, umyalezo obhaliweyo okanye ngeAirBnb ukuba kukho nantoni na.
Hlola ezinye iindawo onokukhetha kuzo e- Lensvik